China New design amane spindle i-ATC izinkuni cnc router ifektri nabakhiqizi | JCUT
Inqubo yokususa ama-oda okuzenzakalelayo, ukusebenzisa kahle, ukuklama, ukusika, ukumba, ukugaya, ukufaka umkhondo, ukusika okuzenzakalelayo nezinye izinqubo zekhabethe ziyaqedwa ngasikhathi sinye. Umshini wokufaka izikhala onemqubo emine, izinzuzo ezine zemishini yokufaka izinyathelo ezine, umshini we-CNC wokufaka.
1. Intengo iphansi: ilungele amafektri amancane naphakathi nendawo efenisha. Ngisho nomshini wokufaka izikhala we-CNC ophakeme ngezinkulungwane eziyi-12-30, uphansi ngentengo uma kuqhathaniswa nemodeli ephethe isikhwama sokudonsa. Kungumqondo omuhle amafektri wefenisha onomfutho omkhulu wezezimali.
2. Door iphaneli iKhabhinethi ukusetshenziswa okungabili: Ukusuka endaweni yokubuka okuhlelekile, izinqubo ezine zingemodeli elula yokuguqula amathuluzi, esebenzisa izikali ezine ukuqaphela umsebenzi wokushintsha amathuluzi ngokushintshwa kwephayiphi. Umzimba wekhabinet ungahlangabezana nomsebenzi wokusika nokubhoboza, futhi futhi ungasetshenziselwa ukucubungula iminyango elula.
3. Ukusebenza okulula: Uma kuqhathaniswa nendawo yokumba nokusika umugqa, ukusebenza komshini wokusika izinqubo ezine kuyinto elula futhi kulula ukuyifunda, futhi lapho shaft eyodwa eyinhloko yehluleka, imishini nayo ingakwazi ukuqedela umsebenzi wokusika nokumba ngokuhamba imigoqo emithathu eyinhloko.
1. Inqubo yokususa i-oda okuzenzakalelayo, ukusebenzisa kahle, ukuklama, ukusika, ukumba, ukugaya, ukufaka umkhondo, ukusika okuzenzakalelayo nezinye izinqubo zekhabethe ziyaqedwa ngasikhathi sinye. Umshini wokufaka izikhala onemqubo emine, izinzuzo ezine zemishini yokufaka izinyathelo ezine, umshini we-CNC wokufaka.
2. Imboni yomnyango wokuhlobisa ifenisha kanye nomnyango wefenisha: umnyango oqinile wamapulangwe kanye nomnyango oyinhlanganisela, umnyango wekhabethe, indawo enkulu yokubopha amapulangwe, ukubaza okuqinile kwezinkuni nokugaya, ukufulela ifenisha yasendlini, ukubaza ifenisha yasendulo, ukubaza ifenisha yobuciko obuqinile neminye imboni.
3. Ukusebenza kwezandla okwenziwe ngokhuni: ozimele bewashi, izinhlaka zezithombe zezikebhe, i-aluminium ipuleti eyenziwe ngesandla yezandla nokubaza, i-countertops kagesi, imishini yezemidlalo. Umshini wokufaka izikhala onemqubo emine, izinzuzo ezine zemishini yokufaka izinyathelo ezine, umshini we-CNC wokufaka.
4. Imboni yomkhiqizo we-elekthronikhi: ukukopishwa nokugaya kwamabhodi wesifunda, izinto ezifakwayo, izikrini zokubonisa ze-LED, izinto zasendlini (ama-TV wombala, imishini yokuwasha, iziqandisi) amagobolondo noma amamodeli.
5. Umkhakha wokukhiqiza izinsimbi zomculo: Ukuthwebula indawo egobekile enezinhlangothi ezintathu kanye nokusika ukwakheka kwezinsimbi zomculo, njengokufaka umbhalo wokugaya wamaphaneli amakhulu namakhanda amakhulu.
I-Longteng yesizukulwane sesine-inqubo yesine R4-Imishini yokusika esetshenzisiwe
Indawo yokusebenza （S * Y * Z） I-1220 * 2440 * 200mm (ubude bokusekela 2800 ngokwezifiso)
Ijubane le-Spindle 0-18000 / MIN
Amandla we-Spindle I-GDZ Air Cooling Spindle 6KW * 4
Ithuluzi Lamathuluzi 6KW * 4
Imoto I-leadlight Big Power 1500w servo motor
Isistimu Yokulawula Ngenisa uhlelo lokulawula lweTaiwan LNC MW2200
Ithebula Lomshini We-Vacuum Idizayina enobunikazi obungu-50MM adsorption caliber, ukubekwa uphawu okuhle kwePVececonnection, alikho ibhodi eligijimayo
Iphampu ye-Adsorption Ukujikeleza kwamanzi okungu-7.5KW, (Amandla we-adsorption aqinile, ukuzinza okuphezulu lapho kusetshenziswa imikhiqizo)
Umqokeleli Wothuli I-5.5KW Dust Collector enezikhwama ezimbili
Umshayeli Ukuqondanisa umshayeli we-servo motor
Inverter Ukuguqulwa kwamaza emine nanye, ukuqala kuqala
Ithuluzi lokushintsha ithuluzi I-Zero switch yesibili
Ithrekhi yokudlulisela I-genge yangempela engu-25 yesikwele
Isinciphisi Isilayidi sangempela sangempela esingu-25
Isikulufa sokuhola I-TBI yasekuqaleni 2510 i-lead screw
ikhebula Intambo yokuphepha evikelekile ephezulu kakhulu
Umkhawulo Unikezelwe ekuqondeni okuphambili nokubuyela emuva kwe-router yokusika izinkuni
irack I-HICK yoqobo
Izakhi zikagesi I-Chint yangempela yoqobo
Ukunciphisa kabusha Imodoli yangempela yoqobo
isilinda I-Huadeli (ikhwalithi enhle nokuqina okuqinile)
Ijubane elingenalutho I-100000MM / MIN
Ijubane elikhulu lokusebenza 35000MM / MIN
Ukubukeka okubanzi Isakhiwo sesithathu sesakhiwo se-Longteng se-patent (i-automate control cabinet)
Isakhiwo sebhede Umbhede wokuphehla wokuguguleka osindayo (ukunemba okumbaxambili okugxila okulinganiselwe okungu-0,02mm)
Gantry Inqubo yokwenza imishini yombhede ovumelanayo ohlanganisiwe oneshubhu elingqimba elibunjiwe nomugqa wensimbi wogongolo
Isakhiwo sokudonswa kwekholomu esibalulekile asichithi isikhathi eside
Ikhabethe lokulawulwa kukagesi
Uchungechunge lwekhabethe leLongteng elinelungelo lobunikazi, elisebenza ngokuphelele elisebenza ngokuqonda ikhabinet
Ukulungiselelwa kwethuluzi okuzenzakalelayo
Isikhundla Ukubeka isilinda
Ukulayisha okuzenzakalelayo Ukulayisha okuzenzakalelayo
Indlela yokususa uthuli Spindle ukwahlukanisa okuzenzakalelayo kohlobo oluhlanganisiwe lokususa uthuli nokususa uthuli lwesibili nge-pusher
Isisindo sengqikithi 2600KG
Isisindo esikhulu 2700kg
Ibhokisi Lokhuni Sinikezela Ngebhokisi Elijwayelekile Langaphandle Lokhuni
Izingxenye ongazikhetha Isoftware eku-CD, ikhadi lokulawula (ikhadi le-PCI), ukuhlanganisa namathuluzi okusika, u-Allen Keys, ama-wrenches we-Collet Locknut, i-data Wire, i-Power Line, i-Brush, i-Spanner ne-Clamp. (Lawa mathuluzi mahhala kuwe)
Esedlule: 1212 ukukhangisa kwe-cnc router mahcine
Olandelayo: Ezomnotho ezine inqubo yokwenza umshini wokusika izinkuni u-R4
I-Atc Three Spindle Cnc Router
IMulti Heads Pneumatic Atc Cnc Router
Abathathu Abakhanda be-Atc Cnc Router
CNC atc inqubo emine Wood router
I-4 spindle atc cnc router eyodwa